Izindaba - Kufanele sikhethe kanjani ngokunembile abakhiqizi bekhwalithi ephezulu ye-CNC
Izinsizakusebenza eziyinhloko ezisezingeni eliphakeme zabaphakeli bezimboni ezisebenza ngomshini zigxile ePearl River Delta naseYangtze River Delta esifundeni, lapho inani labakhiqizi bokulungisa i-lathe ye-CNC nalo liyiqembu elikhulu kakhulu. Ngakho-ke ungabakhetha kanjani ngokunembile abakhiqizi be-CNC lathe processing? Wally imishini ubuchwepheshe uzokhuluma nawe mayelana:
Okokuqala, ngaphambi kokukhetha ifektri yokucubungula i-CNC lathe, kufanele siqonde ukuthi umakhi wekhwalithi ephezulu ye-CNC unalezo zimfanelo, ukuthi angakha kanjani izinga eliphakeme?
1. Abakhiqizi bekhwalithi ephezulu ye-CNC kufanele babheke kuqala isithombe namasiko ebhizinisi. Isizathu esiyisisekelo sokuthi kungani kunzima ukwakha isiko embonini yokwenza imishini ukuthi izinga labasebenzi lilonke alilutho. Uma ifektri ye-CNC lathe processing inesithombe esihle sangaphandle namasiko ezinkampani, kukhombisa ukuthi ukuphathwa kwebhizinisi kunake kakhulu, futhi kunokuqeqeshwa okuhle kwabasebenzi nokuqoqwa kwamasiko Izici zabaphakeli bekhwalithi.
2. Indaba yesibili esezingeni eliphakeme le-CNC lathe processing factory yiyona 7S management eyisisekelo. Uma kuqhathaniswa nomkhakha we-elekthronikhi, i-7S embonini yokucubungula imishini inzima kakhulu ukuyisebenzisa. Uma ukuhlelwa kwe-7S nokulungiswa e-workshop kuhle kakhulu, kufanele senze umsebenzi omuhle kakhulu ekuhlukanisweni kwendawo ye-7S, ukubekwa kwezinto ezibonakalayo kanye nokwenza imigomo yokusebenza Abakhiqizi bangakunciphisa ukuvela kwemikhiqizo eminingi enesici, ukulethwa kuzofika ngesikhathi.
3. Hlola ukusetshenziswa okuningiliziwe kohlelo lokuphathwa kwebhizinisi, inqubo yokucubungula amakhotheshini, inqubo yokulethwa kwe-oda, inqubo yokuthuthukisa inqubo, inqubo yokulawula ikhwalithi kanye nenqubo yohlelo. Uma kuhlangatshezwana nalezi zimo ezingenhla, kukhombisa ukuthi ukusebenza kwebhizinisi nakho kuhle futhi kunezici zekhwalithi ephezulu yokucubungula i-CNC lathe.
Ngamafuphi, abakhiqizi abakhulu be-lathe be-CNC banesithombe esihle sangaphandle kanye neqembu lokuphatha abavuthiwe, futhi ukusebenza kwesikhathi eside kwakha isimo esihle senkcubeko yenkampani. Umbono kaVolley imishini ubuchwepheshe ukuthi ukucubungula imishini kungasiza emisha yezobuchwepheshe. Sinethemba lokuba iprosesa evelele emkhakheni wokulungiswa kwemishini futhi sibe neqhaza emisha naseChina.